တဂျီးသို့ – ရွာ အကြောင်း ကောင်းကောင်း သိစေရမယ် (Member Links) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » တဂျီးသို့ – ရွာ အကြောင်း ကောင်းကောင်း သိစေရမယ် (Member Links)	62
တဂျီးသို့ – ရွာ အကြောင်း ကောင်းကောင်း သိစေရမယ် (Member Links)
Posted by ဇီဇီ on Jul 3, 2015 in Creative Writing, How To.., Myanmar Gazette, Society & Lifestyle | 62 comments
တဂျီးကို ဆဲစာမှတ်ပြီး ဝမ်းသာအားရ ဝင်လာကြတာလားးး??
သူ့ကို ခေါင်းစဉ်တတ်ရင် လူပိုဝင်တယ် ဆိုလို နာမည်တတ်ထားတာ။
ပြီးတော့ ဒီ ပို့(စ) ရေးဖို့ ရှာရင်းဖွေရင်း အရင် မျက်စိမှောက်မှားခဲ့တဲ့ သဲလွန်စတွေ ကွင်းဆက်တွေ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့။
ရွာအကြောင်း ကောင်းကောင်း ဘယ်သူသိသိမသိသိ ဇီ သိသွားပြီ။
ငါကွ!! စနိုဒန်ဇီ (ခွက်ဒစ်တူ ကိုကိုကြောင်)
ဒီ ဆိုက်မှာ ပို့(စ) ရှာချင်ရင်…
၁) ကက်တဂိုရီနဲ့ ရှာလို့ရတယ်။
၂) စကားလုံးလေး တစ်လုံးလောက် Search Box မှာ ရိုက်လိုက်ရင် အဲဒီ စကားလုံး ပါတဲ့ Random ပို့(စ) တွေ ကျလာမယ်။
၃) ခါတလေ အံစာတုံး စိတ်ကောင်းဝင်တုန်း ရေးထားတဲ့ (အဟိ) ယနေ့ ပို့(စ) လေး ဘာလေး မြင်ရင် သွားကြည့်လို့ရမယ်။
အဲ … ဒါပေမဲ့……
ရေးတဲ့သူနာမည်နဲ့ ရှာဖို့ အင်မတန်ခက်တယ်။
ပို့(စ) တစ်ခုကို ဘယ်သူရေးတယ်လို့ မှတ်မိပေမဲ့ အဲဒီ လူရဲ့ Page ကို သွားဖို့ အဲဒီ ရေးသူ Active ဖြစ်နေမှ သွားဖို့ လွယ်တဲ့ သဘောဖြစ်နေတယ်။
ဒီတော့ကာ …. ကျနော် ဒီပို့(စ) မှာ နာမည် တွေ ချရေးထားပါတယ်နော့။
အဲဒီ နာမည်ကို နှိပ်ရင် အဲဒီ လူ ရေးထားတဲ့ ပို့(စ) တွေ ရှိတဲ့ စာမျက်နှာတွေ ရောက်ပါ့မယ်။
ကျနော် အခြေခံတာသည် လတ်တလော ရွာမှာ ဖွဘုတ်မှာ သိသလောက် လက်လှမ်းမှီသလောက် ရှာထားတာမို့…..
၁) နာမည်မပါခဲ့ရင်သော်လည်းကောင်း ကြိတ်ပြီး စိတ်ကောက်မနေပဲ လာပြောလို့ရပါတယ်။ ထပ်ဖြည့်ပေးပါ့မယ်။
၂) နာမည် လင့် မဖြစ်ရင်လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။
(နာ့ကို တမင် လုပ်ထားလား လို့ မတွေးပဲ၊ စိတ်ရှင်းရှင်းသာ လာ အပြစ်တင်လိုက်ပါ။ ဒီလောက် အလုပ်ရှုပ်တာ တစ်ယောက်ချင်းကို ပညာပြဖို့ အချိန်မရှိလို့ဘာ၊ ဟောဟဲ)
၃) အသစ်အသစ် ဝင်လာတဲ့ ရွာမှာ ပို့(စ) တင်မဲ့ သူတွေကိုလည်း ဒီ ပို့(စ) ထဲမှာ ထပ်ဖြည့်ပေးသွားပါမယ်လို့။
တဂျီး ကို တောင်းဆိုချင်တာကတော့…..
၁) ဒီ ပို့(စ) ကို “စာရေးသူ နာမည်နဲ့ ရှာလိုလျှင်” ဆိုပြီး ဘေးမှာ ကပ်ပေးဘာ။
၂) အဲလိုမလုပ်ရင် အရင်လူတွေ လုပ်သလို လုပ်ပစ်မယ်။ ခိခု ခုခိ
ဂဇက်က စာရေးသူ နာမည်များပါ။
ထိပ်ဆုံးကတော့ မကောင်းတတ်လို့ တဂျီး ကို ရေးထားပါတယ်။
နောက် က နာမည်တွေက အစဉ်အလိုက်မဟုတ်ပါဘူးးး
ရှာတွေ့တာ အရင် ရေးထားတာပါ။
တော်ကြာ ဘယ်သူ အပေါ် ဘယ်သူ့အောက် ရှာကြံ စိတ်ကောက်မဆိုးလို့။
ဒီ အောက်က နာမည်က လင်တွေ (အဲလေ) လင့် တွေပါ။
ရေးတဲ့သူ ကို နှိပ်လိုက် (အဲလေ) ရေးတဲ့သူရဲ့ နာမည်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ .
Don Juan Ronald
Yin Nyein Nway
ကိုစစ် Ko Six
No Non Negative
A Mar Nyo
U Pyaung Gye
Aye Lwin Oo
Myat Pearl Phyu
ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် ကျော်ဘသစ်
Ko Out of
အမှန်တော့ အရီး ရဲ့ ခြေလှမ်းဦး အမှီ တင်မို့ လုပ်တာပဲ။
လင့် ရှာရတာ အချိန်ယူလိုက်ရလို့။
ဦးကျောက်ခဲ says: ဒမှာ ဇော်ဇော်ခင်ဇီ… ကျောက်စ်ကို ဘာလို့ အောက်ပို့သနည်း…
စိတ်ကောက်ပြီး ရာဇမာန်ရှလိုက်ရ… ခွိ ခွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဟီးးး
အာတီဒုံက လာဘ်ထိုးထား (ဟုတ်ပေါင်) ဟွန့် ယောင်လို့။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5026
အဲ့လိုမျိုး တပုံတပင် တစုတစည်းတည်း ပြထားမှတော့
ရွာဝင်စက ပေါက်ကရ ရေးခဲ့တာတွေ လူသိကုန်တော့မှာပေ့ါ
ဇီဇီခင်ဇော် says: အေးးဆို။
နာ ဆို လူတိုင်း နောက်ကြောင်း တူးရင်း တူးရင်းးး အဲ
တောင်ပေါ်သား says: ကျနော့်နာမည် တောင်ပေါ်သား
ဟုတ်တော့ဝူးဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပြောင်းပေးလိုက်ပြီလို့။
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: စလုံးမှာ SALT လုပ်နေတဲ့ ဇွီပိုင် ဂျိုဇီခင်ဇော် ဖွတ်ဒွကို အင်ဖောမာလုပ်ဖို့ သဒင်းတင်နေဘီ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲလိုတွေ ဟိုဘက်လင့် ဒီဘက်လင့်တွေ ဟိုကူးဒီကူး အလုပ်ကောင်းလို့ ကွန်ပူတာဂျီး ဒေါင်းသွားတာနဲ့ ၂ ရက်လောက် ငြိမ်နေရတယ်။
CharTooLan says: ညိန်မနေဘာဘူး အစားတွေအညိုးညိုးလုပ်စားနေဒယ်မှတ်လား
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲ။
Was this answer helpful?LikeDislike 2389
aye.kk says: ဇီဇီရယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကြားရတာ ဝမ်းသာပါတယ် တီအေးရေ
Ma Ei says: အောက်ဆုံးက ဇီဇီခင်ဇော် ဆိုတာ ဘယ်သူလေးလဲ…
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဟိ။
ချစ်သူတွေပိုချစ်ပြီး မုန်းသူတွေပိုမုန်းကြမဲ့ ဇီဇီခင်ဇော်ရယ်ပါ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3138
surmi says: ဆွမ်းကြီးလောင်းမလို့ပြေးဝင်လာတာ
စတုဒီသာနဲ့ တွေ့သွားရတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဟီးဟီးးး
ပါလာတဲ့ ဆွမ်းဆန်လေး စတုဒီသာအတွက် လှူခဲ့နော်လို့။
Mike says: .ဇော်ဇော်ခင်ဇီရေ..ဘရာဗိုပါဗျာ…မွှေနှောက်နိုင်တာချီးကျူးပါရဲ့…
.ယနေ့ပိုစ့်ကတစ်လတွင်းတင်သမျှ…ဒါကတော့ စာရေးသူတို့တစ်သက်လုံးတင်သမျှဖစ်သွားတာပေါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ကြိုက်သလောက်တင် ဒီ လင့် အတွင်းမှာပဲ ရှိမှာ။
Alinsett @ Maung Thura says: စာချစ်သူဆိုတဲ့ အဖွဲ့လေး မပါသေးဘူး မမဂျီး
လင့်ခ်တွေ ချိတ်ရတာ . . .နဲ့ တင်. . .
ဒီပိုစ့်တင်ရတာ အတော် ဖတ်ဖတ်မောမယ်မှန်းမိ. . .
အဲ့ လင့်ခ်တွေ ထိုင် ရှာရတာကျ ပို မောမှာ. . .
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဪ။
nozomi says: အချိန်ပေး ကြိုးစားထားတာ အတွက် အားလုံးကိုယ်စား ကျေးဇူးပါ
ကိုယ်တိုင် နှိပ်ကြည့်ရင်း ပို့စ် တစ်ခု ရောက်သွားတယ်
တချို့ ကွန်းမန့်တွေက ရဲရဲတောက်လို့
ကွန်းမန့် တစ်ခု ကတော့ အမေ မဆုံးခင် ၂ ရက်က ပေးထားတဲ့ ကွန့်မန့်လေးဖြစ်နေတယ်
အမေ ကို သတိရလိုက်တာ
ဇီဇီခင်ဇော် says: လာအားပေးးလို့ ကျေးးဇူးးပါ ကိုနို
Ma Ma says: ဤသည်လည်း သိမ်းထုပ်သေချာဖြစ်ပေသည်တမုံ့…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒီလို သိမ်းးထားးတော့ မပျောက်မပျက်တော့ဘူးးပေါ့ ခွိ
မောင်ဘလိူင် says: လင့်​​တွေနှိပ်​ကြည့်​တာ ဘာမှမ​ပေါ်ဘူး အစ်​မ​ရေ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခုပဲ စမ်းးလိုက်တာ ပေါ်ပါတယ် ကွဲ့
မောင်ဘလိူင် says: ကျွန်တော့်ဘက်က ကွန် မကောင်းလို့ထင်တယ် အစ်မ။ ခု ရသွားပါပြီ။
Wow says: ဟိုတစ်နေ့က ညနေခင်းမာ နာ့အလှတွေ့ပီး သူဂယောင်၆ခြားဒွေ ဖစ်နေတာချွိ ဘာမှဟုတ်ဖူးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: မိုးးးး
နာ့မဒေါ့ မိုးး (သို့) လှိုင် လေးး နဲ့ နီးးဖို့ ကြည့်လိုက်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဒေ
Wow says: စိတ်ပူပါနဲ့အေ.. နေ၀င်ရီတရော ဆံပင်စုတ်ဖွား… အထုတ်ကြီးနှစ်ထုတ်လက်ဆွဲ ထီးချိုင်းခြားညှပ်ထားတဲ့ နာ့ကျိပီးးး လိပ်ပြာလန့်သွားဒါဖစ်မယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: ချပ်ညရီတွင်
ရှင် သာ လှည်းးတန်းး တန်ဆောင်လော
နိ အလှမှာ မြောသူ အတော်များးနေဘီ ခိခိ
Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: .အရမ်းအရမ်းကို အသုံးဝင်တာပါကလား ကေဇီရေ…
.ဒါအတွက် အတော်ကြီး အပင်ပန်းခံ အချိန်ပေးထားရလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းမိပါတယ်…
.ကျုပ်တို့မှာဖြင့် ဆိုက်ထဲ လာချင်လာမယ် မလာချင်လှည့်မကြည့်ဘူးဆိုတာမျိုး
.ဒီလို ရွာရဲ့အကျိုးကို တကယ်ကြည့် တကယ်လုပ်နေသူတွေ တွေ့ရတော့
.ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ မလုံမလဲ ဖြစ်ရတယ်..
ဇီဇီခင်ဇော် says: မဖြစ်ပါနဲ့ ဦးးပါရေ
အရင် လူကြီးး ကလေးးတွေ လုပ်ခဲ့တာတွေ ကြောင့် ကျနော်တို့ ဒီလောက် အဆင်ပြေနေတာမို့
နောက်သုံးးမယ့် သူတွေ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးး ရမယ့် တာဝန် ရှိပါတယ်
ကျနော့် ကိုသကြားးမင်းး ကူပါတယ်
ရာမည says: စန်းစန်းတင့် အထီးကျန်ပါသေးတယ်ခင်ဗျ ဟီဟိ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရှင်နော် ရှင်
ကျုပ် ပို့စ် ကို လူစည်စေချင်လို့လားးး
မြစပဲရိုး says: ချစ်ဖို့ကောင်းလေး။ :-)))
အဲဒီမှာ နံပါတ်လေးတွေ ပါ တပ်ပေးပါ ဇီကလေး။
. နောက် အပါတ် က စပြီး အဲဒီ နံပါတ်တွေ ကို ယူမယ်။
ဒီအပါတ်တော့ လက်လွန်ထားပြီ။ ဟိ။
ဘူလဲ ဆိုတာ လာမည်။
နက်ဖြန် မှ တင်တော့မည်။
ယခု အိပ်ချင်ပြီ။ :-))
ဇီဇီခင်ဇော် says: အရီးရေ
နံပတ် တပ်တာ ကပ်လွန်းးလို့ ကော်မန့် မှာ နံပတ်တပ်ပြီးးး ပေးးမယ်နော်..
Courage says: ဟိုက်စ်တော်တော့ကို စိတ်ရှုပ်ခံပြီး လုပ်ထားရမှာပဲ။
အချိန်ကုန် လူပန်းအဖြစ်ခံပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ စေတနာတွေ ဗရပွကို မြင်ရတော့ နှစ်ထောင်းအားရ ၀မ်းသာ ရွှင်ပြ ကြည်နူးပီတိဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ကျေးဇူးပါ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: မောင်မောင် ကာ
စကားး ကြားး ရတာ ပီတိ ဖြစ်ပါတယ်လေ
လုံမလေးမွန်မွန် says: သဂျီးစကား ခဏငှားပြောလိုက်မယ်.. ဆွိမမက စုရဆောင်းရတာ တယ်ဝါသနာပါတယ်နော်.. ဘာပဲပြောပြော အံစာတုံးနဲ့ သများကို ဆက်တိုက်စီထားတာကတော့ တမင်လုပ်တယ်ပဲ ထားလိုက်ပါ.. ဟိဟိ…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဝါသနာ ပါလွန်းလို့တော့ မဟုတ်ပေါင်၊
အံစာဆို မွန်နဲ့ တွဲသတိရတော့ အတူရှာပြီး ထားဖြစ်တာ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဒါမျိုးစုရတာ လွယ်တာမှတ်လို့.. သများဆို ကိုယ့်လင် အဲ ကိုယ့်လင့်တောင် ကိုယ်ရှာရတာ စိတ်မရှည်… တစ်ခုခုဆို ရွာထဲဝင်ရှာရတာ အကျင့်ဖြစ်နေပြီ.. အများဆုံးရှာဖြစ်တာ ရွာထမင်းဆိုင်နဲ့ အန်တီဝေရဲ့ ခရီးသွားပို့စ်တွေ… ဘာစားရမှန်းမသိတိုင်း.. ထမင်းဆိုင်ကို ဝင်မွှေတယ်.. အခုဆို bookmark တောင် လုပ်ထားသေး..
ခရီးစဉ်တစ်ခု အသစ်ဆွဲရမယ်ဆိုတိုင်း အန်တီဝေရဲ့ ပို့စ်တွေကို ဝင်မွှေတယ်.. pdf နဲ့ save တယ်… ခုလိုမျိုးလေးဆို အတော်အဆင်ပြေသွားပြီ.. ဘယ်သူက ဘာပို့စ်မျိုးတင်တတ်တယ်ဆိုတာ သိနေတော့.. လိုချင်လာရင် အလွယ်လေးပဲ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: အားလုံး အတွက် လင် ရှာ ရ (အဲ) လင့် ရှာရ လွယ်ကူစေဖို့ ဒီ ပို့(စ) ကို ဘွတ် မတ် ထား ပါ လို့။
Wow says: အခုလို နာ့ရဲ့ပိတ်သတ်ကျီးအတွက် တန်ဖိုးရှိ တင်ကျန်မဲ့စာတွေကို ခုလို အလွယ်တကူကျိလို့ရအောင် လုပ်ထားပေးတာ… အဟွတ်… အဟွတ်….
ဟီးးးးး မတန်မရာပေါတော့ ချောင်းက ထိန်းမြ၀ူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့ပေါဒါ။
ဂလိုလုပ်တော့ နာဒို့ရဲ့ စာဂေါင်းစာမွှန် ဒွေ အလွယ်ဒဂူ ဖတ်လို့ရဒါပေါ့လို့။
မွသဲ ( 17082011 ) says: ယောက်ခမွဆိုဒါရှေ့တန်းတင်ရမယ်ဆိုဒါမတိလေဒလားချွေးမွလေးရယ်။ ဂျားထဲရောက်နေဒယ် ကောက်ပလိုက်ပီ ဟိဟိ
အတော်ပဲ ကိုယ့်ပိုစ်တောင်ကိုယ် ဘယ်လိုရှာရမယ်မသိနေဒါ ခုတော့လွယ်သွားဘီ။ သဂျီးစတစ်ကီပေးဘာဗျို့ ဖြုတ်မပစ်နဲ့နော်
မကောက် ပါ နဲ့ ယောက်ခမ။
ဘေး စာရင်း ထဲမှာ ရောက်နေပါပြီ
ကူမားရ် says: တွေ့တွေ့ခြင်း ဆော်ပြီဆိုပြီး ဝင်ဒယ်
ဖတ်ဖတ်ခြင်း သိလိုက်တယ် အင်ဂျီး
အကုန်တွေ့ တယ် ကိုယ်ဆိုလုပ်တတ်ဘူး တော်ထှာ
ခေါက်ခေါက်ခြင်း နောက်ပေ့ခ်ျတစ်ခုရောက်တယ် အေဖြူရောင်ဗျောင်ဂျီး
တွေ့တွေ့ခြင်း စိတ်သက်သာရာ ရတယ် ကံကောင်းလို့ ဘာမှရှိဝူး တောက်ရှက်ကွဲတော့ဝူး ဆြုိပီး
နာကွ ဗေတားကွ ဘာမှရေးဝူး ဒီတိုင်းကို လွှတ်တောနေဒါ ခိခိ
ဇီဇီခင်ဇော် says: မယ် ဝါးးရေ
လင် မရ အဲ လင့် က ဖွင့်မရအော်နေဒယ်..
သူများးဒေ အထင်လွဲအောင် အော်ပါနဲ့
Wow says: ဟိုတလောက ပန်းအိုးကွဲပီး အပင်သေသွားလို့ညန်းးးးလားးးး ဟင်… ဘာမှလဲ ဆိုင်ဝူးနော်… ကွန်မကောင်းလို့နေမာပါအေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1870
nature says: ရွာအတွက်အဖိုးတန်တဲ့ ပို့စ်ကလေးတခုကိုအချိန်ယူလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ ရွာရဲ့အနှစ်ချုပ် မာတိကာလေးပါပဲ။ အဟောင်းပြန်ဖတ်ချင်ရင်အင်မတန်အဆင်ပြေပါတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကျေးးဇူးးတင်ပါတယ် ဦနေးးချားးရေ
​ဒေါ် လေး says: ကောင်းလိုက်တာ အဟောင်းတွေ ရှာရလွယ်သွားပြီ
ရွာကိုလူပြန်စည် အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဇီဇီ နဲ့ အရီးက နံပါတ် ၁
မှတ်ချက်တွေ ဖတ်ရတာ လဲရီရတယ်
ရင်းနှီး ချစ်ခင် ကြတာ ပျော် စရာ
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘယ်ဘဝက ရေစက်တွေလည်းမှ မသိ ဒေါ်လေးရေ။
ဦးကြောင်ကြီး says: တလှုပ်သဗုံကြေးမုံဂျီး မတွေ့ဘာလှား.. တေဗလား…။ ပြု အလေးနှီဖြင့်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဥကြောင်ပါမှတော့ သူမပါစရာလားး
နံပတ် ၄၂ မှာ,,,
padonmar says: ဇီဇီလေး အချစ်ဆုံးတွေက ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ပြတာပါ ပိတ်သတ်ကြီး။(ကိုယ့်နာမည် အပေါ် ကပ်နေလို့ ၊ငါကွ )
ကျေးဇူးပါ ဇီကလေးရေ။ဒါကြောင့် ချစ်ရတာ။
တခါတလေ ကိုယ်ရေးတာတောင် ပြန်ရှာရခက်နေတာ။
Active မဖြစ်တဲ့သူဆို ကိုးကားလို့ကို မရ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: သူ သိသွားးပြီ
သတိတရ လာတဲ့ အတွက် ကျေးးကျေးးပါ အာတီဒုံ
manawphyulay says: အခုလို တစုတစည်းထဲ တင်ပေးထားတော့ အပိုင်းဆက်နဲ့ ဖတ်ရတဲ့ စာရေးသူနာမည်တွေကို အလွယ်တကူဖတ်ခွင့်ရတာပေါ့နော်… ကျေးကျေးပါ….
ဇီဇီခင်ဇော် says: လာအားပေးလို့ ကျေးကျေး ပါ မနော ရေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6346
E.မြောက်မြောက် says: Iခု I ခု
ဆဲဗင်း အေအမ် ထိုးတော့မယ် အမှိုက်ကောက်ကြစို့
ဒီထဲမယ် ဂန်ထဝင် ဆာရေးစရာ အီးမြောက်မြောက် ပျောက်နေတယ်
တော်ကြာ ပင်စင်ပေးရင် မပါပဲနေမှာစိုးလို့ပါဗျ
ဇီဇီခင်ဇော် says: အေးဟေ။
ဒါမှမဟုတ် နိ ဝင်ပြင်လိုက်လည်း ရဒါပဲကို။